ogeysiin ka bixid - Tenants Victoria
ogeysiin ka bixid
Haddii uu milkiilahaaga guriga uu doonayo inaad ka guurto hantida, waa inay ku siiyaan ogeysiin jirtaogeysiin ka guurid. Waxaa jira asbaabo badan oo kala duduwan sababta uu milkiilahaaga guri uu kuu siin karo ogeysiin ka guurid, dhererka muddadda ogeyiintaasina waxay ku xiran tahay sababtee milkiilaha guriga uu kuu siinayo ogeysiin iyo in ama aad leedahay heshiis kiro muddo-go’an.
Waa muhiin inaad ogaato in maahin oo keliya inaad heshay ogeysiin ka guurid, macnaheeda maahin in aad guurto. Haddii uu milkiilaha guriga uu doonayo inuu kaa saaro, waa inay marka hore ay codsadaanGolaha Maamlka Xeer ilaalinta iyyo bulshada kana dhaadhiciyaan Maxkamadda waa in la siiyaaamar u lahaanta.
ogeysiin isla markiiba ah ee guurid
Milkiilaha wuu ku siin karaa ogeysiin ka guurid isla markiiba ah hadddii dhismaha la kireystay la burburiyo ama aysan ku habooneyn in lagu noolaado. ogeysiinta isla markiiba ha xittaan waxaa lagu siin karaa haddii adiga ( ama martidaada guriga) si ula kac ah u waxyeeleysaan hantida ama halis ku tihiin amniga dereska.
Maxkamadda waxay kaga baahan tahay milkiilaha guriga cadeymo la texgelin karo ee dacwadaani. Haddii aad hesho ogeysiin isla markii guuris ah waa inaad anaga nala soo xiriirtaa tallo siin deg-deg ah.
ogeysiin 14 maalmoodah ee guuris
Goormee lagu siin karaa ogeysiin guuris 14-maalmood ah:
kiraddaada ayaa 14 maalmood kuguu harsan (tusaalekugu baaqatay)
waxaad ku guul dareysatay bixinta isku xerka ( haddii heshiiskaagii kireysiga uu leeyahay waa inaad bixisaa isku xerka)
waxaad degtay ama kireysatay dhismaha milkiilaha guriga heshiis la’aantiisa
kiradaada waxay leedahay sharuudo ka mamnuucaaya inay caruur ku noolaato dhismaha adigana waxaad jebineysaa sharuudahaasi
waxaad hantida u isticmaashay ujeedooyin sharci darro ah (ama u ogolaatay in dad kale idaasi sameeyaan)
waxaad ku guul dareysatay adeecidda fullinta amarka ay sameysay Maxkamadda ee qeybta hoos imaaneysa 212 ee RTA
waxaa jebisay hawlaha waxaadna heshay labo ogeysiin jebin hawlaha ee isla jebinta
waxaa tahay kireyste dadweyne waxaadna marin habaabisay milkiilaha guri ee guriyeynta dadweynaha arrimaha ku saabsan u qalmidda guriyeen dadweyn
waxaa tahay kireyste dadweyn waxaadna daabuleysaa ama isku dayday inaad daabusho muqaadaraad, u qeybin muqaadaraad qof ka yar 18, beerid ama isku dayid beerid dhir maan-dooriye, ama aad ku dhex leedahay ashyaa’da bilowga ah ee ujeedooyinka daabulid hantida kiro dhexdeeda ama goobo caan ah
milkiilaga guriga mowqifyadiisa meel degenaansho
Haddii hantida ay tahay milkiilaha guri meel degenaanshihhiisa ka hor inta aadan soo gelin, wey ku siin karaan 14-maalmood ogeysiin ku gaaris haddii:
aad leedahay muddo-xaddidan heshiis kiro; iyo
taariikhda baabi’nta ee ku xusan ogeysiinta ama taariikhda ay ku eg tahay hehiiska kireysigaaga; iyo
waxay ku caddahay heshiiskaaga kireysiga in dhismaha yahay milkiilha guri meeshiisa degenaansho ka hor inta aadan u soo guurin; iyo
waxay ku cadahay heshiiska kireysiga in milkiilaha guriga uu damacsan yahay inuu dib ugu soo guuro dhamaadka muddada go’an.
ogeysiin 28-maalmood kaga guris ee deyn bixiyayaasha
Haddii ay jirto deyn lagu leeyahay hantida la kireynaayo ee aad soo gasha ka hor kireysigaaga, deen bixiyahay (badanaaba waa bangi) ay noqoto inay la wareegaan hantida, ama inay iibiyaan hantida, deenbixiyayaasha waxay ku siin karaan ogeysiin 28 maalmood si aad ugu guurto.
dacwadaha badankooda, kireystaha laga yaabe inuu awoodo ka qeybqeybqaadashad amarka dhageysiga la wareegidda, doonaayana in dib loo dhigo waqtiga ka hor inta ugu yeerin maxkamadda guuris booliskana fulinin. Maxkamadda way damaanad qaadi kartaa ugu badnaan 30 maalmood ka inta ay bixinin ugu yeeridda.
Haddii laguugu qasbo inaad ka guurto hantida kiradda sababtoo ah ogeysiin ka guuris ee deenbixiyayaasha, waxaad awoodaa inaad ku sheegato magdhaw milkiilahaaga guri. Tallo bixin waa loo baahan doonaa ee arrimhaani.
ogeysiin 60-maalmood ee ka guuris
Ogeysiin 60-maalmood ee ka guuris waxaa lagu siin karaa oo keliya marka aysan jirin heshiis kireysi muddo-go’an, ama taariikhda baabi’inta ee ku xusan ogeysiinta (tusaale taariikhda lagu siiyay inaad guurto ama) kadib taariikhda ay ku eg tahay heshiiska muddada-go’an.
Milkiilaha guriga wuu ku siin karaa ogeysiin 60-maalmood inaad ku guurtid marka, isla markii kadib muddada 60-maalmood, dhismaha wuxuu ahaan doonaa:
loo isctimaalay ujeedooyin kale aan aheyn kireyn degenaansho ( sida ganacsi)
ku jira milkiilaha guriga, ama milkiilaha xaaskiisa, wiilkiisa, gabadhiisa, waalid ama xaaska waalidkeeda, ama qof caadi ahaan la nool milkiilaha kuna tiirsan milkiilaha
la iibiyay ama beec ku jira isagoo cidlo ah
dayactirid, dib u habeyn ama dib u dhisid, iyo tani laguma sameyn karo illamaa dhismaha laga baneynin
loo isticmaala ujeedooyin dadweyne ( haddii ay tahay hanti dadweyne)
Haddii milkiilaha guri kena ogeysiin mid ka mid ah 4 asbaabod ee kor ku xusan, ma ay kireyn karaa dhismaha mar kale 6 bilood kadib ogeysiin bixinta (illamaa ay u ogolaanayaan qofka loo gudbiyay ogeysiinta ama ay ka heystaan ruqsad Maxkamadda).
Ogeysiin 60-maalmood ee ka guuris xittaa waxaa la siin karaa haddii milkiilaha uu galo mucaahado iibin ee dhismaha la kireystay.
ogeysiin 120-maalmood oo ka guuris
Milkiilaha guriga wuu bixin karaa 120-maalmood ogeysiin aan sabab laheyn ka guuris marka ay jirto heshiis kireyste muddaale ( taasi waa, ma jirto wax muddo-go’an ah ama muddo-go’an way dhamaatay) ama marka taariikhda burburinta ee ku xusan ogeysiinta ( tusaale taariikhda lagu siiyay inaad ka guurtoay tahay) waa isla markaas ama kadib taariikhda dhamaadka heshiiska muddada-go’an.
dhamaatay muddadii-go’neyd ee kiro
Milkiilaha guriga wuu ku siin karaa ogeysiin ka guuris dhamaadka muddda-go’an. Taariikhda burburinta ee ku xusan ogeysiinta waa in ay la mid ahaato taariikhda dhamaadka heshiiska muddada-go’an. Haddii aad leedahay heshiis muddada-go’an in ka yar 6 bilood, milkiilaha wuu ku siin karaa 60-maalmood ogeysiin ka guuris ah. Haddii aad leedahay heshiis muddada-go’an in ka yar 6 bilood, milkiilaha wuu ku siin karaa 90-maalmood ogeysiin ka guuris ah.
Haddii aad ka baxdo ka hor dhammaadka muddada-go’an waxaad ahaaneysaa qof ka masuul ah kiradda illaa taariikhda ay ku eg tahay muddada-go’an.
Ogeysiinta ka guurista waa inay ahaato foom qaab haboon oona ay saxiixaan iyo taariikhba leh milkiilaha guriga ama wakaaladda.
Laguma dhaafi karo oo keliya sunduuqaaga waraaqaha ama illinkaaga hoos gelintiisa. waa in adiga qof ahaan gacanta lagaa saaro, ku soo dirid boostadda diiwaan gashan, ama milkiilaha wuxuu kugu siin karaa ogeysiinta hannaan danabeedka sida fariin-danabeedka haddii aad ogolaato. Haddii aad hesho ogeysiin ka guuris qaab danabeed ee aad adigana ruqseynin, fiiri kiraddaada nalana soo xiriir tallooyin dheeri ah.
Haddii ogeysiinta lagu soo diray fariin-danabeed, ogeysiinta waa in lagu daraa waqtiga ay qaaaneyso inay kugu soo gaarto. Fiiri waqtiyadda keenista boostada ee Australia.
Inay noqto wax jira, ogeyiinta ka guuris waa inay leedahay ugu yaraan ogeysiin muddo firaaqeynta ah ee u u baahan yahay sharciga lagu daray waqtiga ay ku qaadaneyso boostada, iyo maalin dheeri eee taariikhda burburinta. Taariikhda burburinta ma raacsana ogeysiinta muddada firaaqeynta. Adiga xittaa waa inaad xaqiijisaa xafidaada baqshada diiwaangashan iyo nambarka tixraaca kan oo noqon kara cadeyn mahiim ah. Xittaa haddii aadan soo qaadanin boostadaada, Maxkamadda waxay weli u sii qaadaneysaa in si sharciga waafaqsan laguugu soo diray.
Sababat ogeysiinta waa inay ahaato mid waadax ah fahfaahin macquula ah leh waana inay ahaato sabab jirta ( aan ka aheyn dacwada 120-maalmood ogeysiin sabab- la’aan ku guuris).
Haddii aysan waafaqsaneyn dhammaan waxyaabahaan loo baahan yahay ogeysiinta ka guuris waa midaan jirin. Haddii aad ka shaki qabto jiritaanka ku saabsan ogeysiinta ka guuris, waa inaad raadisaa tallo siin sida ugu dhaqsiyahay badan.
ogeysiinka guurista caqabooyinkeeda
Waad kula doodi kartaa ogeysiinta ka gguuris 60-maalmood ( illamaa ogeysiin dhamaadka heshiiska muddo-go’an) haddii aad u maleyso ineysan jirin. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad dooneyso inaad kula doodo ka hor inta uu milkiilaha u codsaninMaxkamadda Lahaansho Dhageeysi, waa inaad sidaas ku sameysaa 30 maalmood gudahooda laga bilaabo taariikhda aad heshay ogeysiinta ka guuris. Haddii aadan kula doodin ogeysiinta 30 maalmood gudahooda, weli waad kula doodi kataa jiritaankeeda Lahaanshaha Dhageyiga.
Adiga xittaa waad kula doodi kartaa 220-maalmood sabab la’aan Ogeysiin ka guuris ama Ogeysiinta dhamaadka muddada-go’an haddii aad aaminsan tahay in laguu siiyaya ka aarsi ee ku leyliyeen xaquuqdaada Xeeraka Kiradda Degenaanshaha 1997( tusaale weydiinta dayactiradda). Waqtiyaddaan xaddidan ee soo socda codso ogeysiinta lagu siiyay ee aarsiga:
60-maalmood ku doodid 120- maalmood ogeysiin sabab la’aan ka guuris
21 maalmood ku doodid 60-maalmood ogeysiin ka guuris dhamaadka muddda-go’an ee ka yar 6 bilood
28 maalmood ku doodid 90 maalmood ogeysiin ka guuris dhamaadka muddda-go’an ee ka yar 6 bilood ama ka badan
Haddii aad heshay ogeysiin ka guuris ee aadna dooneysi inaad ogaato haddii aad ku doodi kartid, nala soo xiriir sida ugu dhaqsiyaha badan.
ka tegista ka hor inteysan aqtigeeda dhamaanin ogeysiinta
Haddii aad leedahay heshiis muddo-go’an waxaad xaq sharci ah u leedahay inaa joogto illaa dhamaadka mudadaasi illamaa aad hesho ogeysiin ka guuris jirta iyo Maxkamadda u go’aamiso milkiilaha guriga lahaanso amar. Haddii lagu siiyo ogeysiin ula kaca ha ee ka guuris ka hortaariikhda burburinta ka hor dhamaadka heshiis ee mudddad-go’an, waxaa jiri kara qaar masuulida sharci ee jebinta kireysigaaga dhaqsi ahaan. Haddii aadan dooneynin inaad ka guurto dhamaadka muddada-go’an, am ka hor wax loo baahanyahay ee ogeysiinta waxaa marweliba isku dayi kartaa gorgortan heshiis milkiilahaaga ama wakaalaadda. Xaqiiji inaad ku hesho heshiiska qoraal ahaan, saxiixeen adiga iyo milkiilahaaga guriga ama wakaaladda.
Haddii aad haysato heshiis muddaale kiro, marxaladdaha qaar waxaad awood u lahaan kartaa in lagu siiyo 14- maalmood ogeysiin ula kac ah ee ka guuris kadib helitaanka ogeysiin ka guurista. Fiiri marka aad bixi karto.
Notice to Vacate | Somali | June 2017